AKHRISO:- Jadwalka doorashada Madaxweynaha maamulka Galmudug oo lagu dhawaaqay – Hiiraanxog.net
HomeWararka SoomaaliaAKHRISO:- Jadwalka doorashada Madaxweynaha maamulka Galmudug oo lagu dhawaaqay
AKHRISO:- Jadwalka doorashada Madaxweynaha maamulka Galmudug oo lagu dhawaaqay
Hiiraan Xog, Oct 11, 2017:- Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka Galmudug ayaa ku dhawaaqay Jadwal la sheegay inuu noqon doono kan doorashada madaxweynaha maamulka Galmudug.
Xildhibaanada oo dhawaan sheegay inay xilka ka qaaden Madaxweyne Xaaf ay Jadwalka ku sheegay mid rasmi ah, isla markaana lagu dooran doono Madaxweyne cusub.
Xildhibaanada garabka ku kacsan Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa sheegay in Galmudug aysan laheyn wax maamul ah, sidaa aawgeed ay doonayaan inay doortaan hogaan cusub.
Xildhibaanadu waxa ay sheegen in Jadwalka la soo saaray uu yahay Jadwalka Doorashada maamulka Galmudug, waxaana ay sameeyeen Guddiga Doorashada Madaxweynaha maamulka Galmudug.
HALKAAN KA AKHRISO JADWALKA.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo fariin adag u diray Maamul goboledyada dalka ka jira
Ciidamada Sheekh Mukhtaar Roobow iy Al-Shabaab oo ku dagaalamay degaanka Abal ee gobolka Bakool